I-Cottage Jean Minot - T3 - eqashisayo 2
U-Jean Louis uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
E-Saint-Geours-d'Auribat en Chalosse, uJean-Louis uhlinzeka ngezindlu ezi-3 eziqashisayo ezinefenisha ezinethezekile kakhulu. Le ndlu enezinkanyezi ezi-4 inikeza igumbi lokuhlala elikhulu, ikhishi laseMelika kanye nehhovisi. Leli gumbi lokuphumula liholela egumbini lokulala elikhulu elinethala layo. Imalimboleko yamabhayisikili, i-carport, igumbi lokuwasha elinomshini wokuwasha nokomisa, ikhishi elihlome ngokuphelele, njll. Uzophinde ujabulele indawo ezolile, ingadi enezimbali kanye nama-grill esoso.
Indlu oluthathwa Ngakho 4 izinkanyezi ne induduzo enkulu ekuphumuleni kangcono futhi ujabulele Chalosse yethu, esifundeni nge idumela lalo gourmet, zokudlela zalo ezinhle, bheka Landes Yiqiniso, vakashela Museum nasemizaneni ejwayelekile, layo namathafa inamagquma bese ikhambi noma mini ikhambi spa ngesikhathi Indawo yokuphumula ye-Prechacq les Bains, cishe yonke into yokuhlala okumnandi.
Izitolo kanye ne-Chalosse Museum kuqhele ngamakhilomitha ayi-6 eMontfort-en-Chalosse. Izindawo zokugeza ezishisayo zase-Préchacq-les-Bains zingaphansi kwamakhilomitha ayi-9, indawo yokuphumula ye-DAX spa iqhele ngamakhilomitha angama-20. Indlela yokuhamba ngezinyawo ukusuka ekotishi. Amathuba okudoba emfuleni noma echibini. I-Chalosse greenway iqhele ngamakhilomitha angu-4.9. Indlela yokuhamba ngezinyawo ukusuka ekotishi noma ukugibela ibhayisikili ezintabeni namabhayisikili. Izindlela ezimakiwe.
Iyatholakala - Indlu yomnikazi endaweni eseduze.